ISLAAMKA IYO LOOLANKA ALLE DIIDNIMADA IYO GAALNIMADA. – Sumcadda Islaamka
Waxaa aad ubadanaya dadka soomaalida ah ee diintii ka tagaya ama ha noqdeen mulxidiin ama naf ha ka dayeen diimo kale sida masiixiyadda iwm.
Dad badan oo iyaga ka mid ah oo ay doodi na dhex martay waqti sii horeysay waxay ubadnaayeen kuwo aan cilmi badan oo diinta ku saabsan aan hore ulahayn,waxayse ka sinaayeen in eedda ugu badan ee ay islaamka uga huleeleen ay tahay in diintu islaamku tahay mid adag oo aan la socon karin nolosha casriga ah.
Taasi waxay daliil utahay cilmi yaraantooda iyo iyaga oo ku saamoobay kooxo xagjiro ah oo diinta aad ugu talax tagay wax badan oo ay diinta fududaysayna dadka ku adkeeyay kuwaas sida aan lasocono waayadan dambe meelaha soomaaludu dagto ka calanwanleynayay.
Anigoo arimahan ka duulaya waxan ku talin lahaa in dadka diin fidinta ku howlan ee ay ugu horeeyaan culimada soomaaliyeed ay udaymo lahaadaan waxa socda isla markaasna wax ka badalaan wajigii hore ee dacwo fidinta kaas oo runtii ujanjeeray dhinaca ad adayga iyo ka badbadinta.
Culimada iyo ducaadda iyo dadka nasteexada diinta ku howlan waxaa la gudbooon inay fududeeyaan khidaabka diiniga ahi oo ay la saayiraan waqtiga iyo hadba waxa socda waayo ummaddan nabi dambe uma soo baxayo kitaab kalana uma soo dagaayo.
Laakiin waxaan tijaabiyay mucjisada diinta ummadan oo ah mid cajiib ah oo waqti kasta la socon karta taas aniga shakhsi ahaan waan ogaaday waanan tijaabiyay waana biyo kama dhibcaan.
Waxana jira nusuus badan oo arimahaas si sareex ah ugu cad ama laga fahmi karo.
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ.
“Ilaahay ma badalo sida dad yihiin ilaa ay iyaga naftooda iska badalaan”
“أنتم أعلم بأمور دنياكم. ”
“Idinkaa u ogaal badan arimaha adduunyadiina”.
Waxaa aad ubadan dadka hanuuniyayaasha qaar ka mid ah oo ku andacooda in uusan islaamku shaqo ku lahayn loolanka iyo taxadiyaadka iyo jaalanjiga waqtiga keeno oo ay muhiim tahay uun in ladaba galo dadkii hore iyo sida ay wax ufasireen oo qura.
Kolkiiba intuu nabi yusuf cs oo xiran utagay ayuu jawaabtii riyada ukeenay,Taasoo ahayd sidatan:-
Kadib loolankii iyo jaalanjigii mucjisada ahaa ayuu nabi yuusuf ku guulaystay kagana soo baxay xabsiga kuna noqday raysal wasaare uu boqorkii uxilsaaray inuu umaareeyo arimaha oo dhan.
Nebi muuse cs waqtigiisii waxaa kacsanaa oo laga dambeeyay sixirka,rabi sareeye e wuxuu la soo diray mucjiso sixirkii la loolantay oo la jaalanji garaysay kadibna ka adkaatay.
قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِوَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) ۞ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120)
“Waxay yiraahdeen muusow ama rido ama aan ridano,
Wuxuu yiri rita oo markay riteen waxay sixreen dadka indhahoodii oo wax bay rogrogeen waxayna la yimaadeen sixir weyn.
Muuse ayaan uwaxyoonay oon ku niri tuur ushaada waxay gurubsan doontaa waxan ay gadgadinayaan.
Xaqii baa dhacay waxana buray baadilkii ay sameynayeen.
Waa laga guuleystay waxayna rogmadeen iyagoo ah kuwo dullaysan.
Saaxiriintii waxay la daateen sujuud.
Oo waxay rumeeyeen nebi muuse.
Nebi ciise cs waqtigiisii waxaa socday oo aad looga dambeeyay cilmiga caafimaadka iyo cuduro dawaynta waxaa lala soo diray mucjiso la tartantay oo jaalanji garaysay oo darka ka saartay wixii dhaqaatiir jirtay.
Waayo wuxuuba idinka eebbe ku gaaray inuu daweeyo cuduro loo caal waayay kaba sii darane dad dhintay buu idinka eebbe ku soo nooleeyay.
“Waxaan ahay rasuul reer banuu israil loo soo diray,waxan idinla imi aayado cad cad oo xagga rabi ka yimi,waxan dhoobo ka samaynayaa sawir shimbir markasan afuufaya waxay noqonaysaa shimbir ilaahay idinkiis,waxaan dawaynayaa cudurada qatarta ah ee ay ka mid yihiin baraska iyo outisimka, waxaan soo noolaynayaa dadkii idinka dhintay idinka eebe dartiis,waxaan idiin sheegayaa waxa aad cunaysaan iyo cuntada guryaha idiin taalla, arinkaasi waa aayad cad oo eebe idiinku kay soo dhiibay haddii aad tihiin kuwo wax rumaynaya”.
Nebi muxamad scw waxaa waqtigiisii lala hayay gabayada’ aftahanimada iyo bayaanka waxana lala soo diray mucjiso la loolantay oo jaalanji garaysay oo ay la yaabeen carabtii cariga dagnayd oo xujo ay furi waayeen ku noqotay.
Dhab ahaantii waa taxaddi iyo jaalanji waqti kasta shaqayn kara,waxana quraanka dhexdiisa ku kaydsan asraar iyo daliil xilli kasta usuubata oo shaqayn karta,waxna ogama baahna in waqti kasta loo xayirnaado faham iyo fasir dad waqtigoodii noolaa.
Runtiina umaddan waxa kaliya oo maanta ka badbaadin kara kufriga iyo ilxaadka iyo jaalanjiga ay gaalada ku hayaan diintooda waa in la helaa culimo maskax furan oo diinta ummadda uwaafajisa waqtiga socda iyo casriga jooga waayo ma sugayaan nebi dambe oo khaatamul ambiyaa waa nebi muxamad scw.